IGWE MA Ọ BỤ KENYACHA - NKE ỊHỌRỌ MA Ọ BỤRỤ NA Ị GA-AZỤTA LAPTỌỌPỤ MAỌBỤ NYOCHAA? - APTỌỌPỤ - 2019
Igwe ma ọ bụ kenyacha - nke ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ maọbụ nyochaa?
Ọtụtụ ndị, mgbe ị na-ahọrọ ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ laptọọpụ, na-eche na ihuenyo ka mma - matte ma ọ bụ kenyacha. Anaghị m eme ka ị bụ onye ọkachamara na nke a (na n'ozuzu m na-eche na ahụghị m foto ọ bụla karịa Mitsubishi Diamond Pro 930 CRT nyocha), mana m ka ga-agwa gị banyere ihe m kwuru. M ga-enwe obi ụtọ ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu na echiche ya.
N'ọtụtụ nyocha na nyocha maka ụdị ọkwa LCD dị iche iche, otu onye nwere ike ịhụ na ọ bụghị mgbe nile ka ekwuputara na echiche na-eme ka ọ dị mma: agba anaghị apụta ìhè, ma enwere ike ịhụ anyanwụ na ọkụ ọkụ na ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs. Onwe ya, ngosipụta ndị na-egbuke egbuke yiri ka ọ kacha amasị m, ebe ọ bụ na echeghị m nsogbu ọ bụla na isi ihe dị iche iche, na agba na iche dị iche iche n'ụzọ doro anya na ndị na-egbuke egbuke. Hụkwa: IPS ma ọ bụ TN - nke matrik dị mma na ihe dịgasịiche ha.
Achọtara m ákwà 4 n'ime ụlọ m, abụọ n'ime ha dị mma na abụọ matte. Ihe niile na-eji ọnụ ala TN matrik, ya bụ, ọ bụghị Apple Cinema Ngosipụta, ọ bụghị IPS ma ọ bụ ihe yiri ya. Foto dị n'okpuru ebe a ga-abụ naanị ndị a.
Kedu ihe dị iche n'etiti matte na glossy screen?
N'ezie, mgbe ị na-eji otu matrix na-emepụta ihuenyo ahụ, ọdịiche dị naanị n'ụdị mkpuchi ya: n'otu oge, ọ bụ kenkowa, na nke ọzọ - matte.
Otu ndị na-emepụta nwere monitors, laptọọpụ na monoblocks na ntanye abụọ dị na ntanetị ngwaahịa ha: mgbe ị na-ahọrọ ngosipụta dị mma ma ọ bụ matte maka ngwaahịa ọzọ, enwere ike ikwu na o nwere ike iji ya mee ihe n'ọnọdụ dị iche iche, amaghị m.
A na-ekwere na ihe eji egbuke egbuke na-egosiputa ihe oyiyi zuru ezu, ọdịiche dị elu, agba agba agba. N'otu oge ahụ, ìhè anyanwụ na ọkụ na-egbukepụ egbukepụ nwere ike ime ka ikpuchi anya nke na-emetụta arụmọrụ nkịtị na-eme ka ihe nyocha.
Igwe ihuenyo Matte bụ ntụgharị uche na-emegide, ya mere na-arụ ọrụ n'ìhè na-enwu gbaa n'azụ ụdị ihuenyo a kwesịrị inwekwu ntụsara ahụ. Ntughari ihu na-agba agba, M ga - asị, dịka a ga - asị na ị na - elele anya site na mpempe akwụkwọ ọcha dị ezigbo mkpa.
Na nke onye ịhọrọ?
Onwe m, m na-ahọrọ ákwà mkpuchi maka àgwà onyinyo, mana anaghị m eji laptọọpụ na-anọdụ na anyanwụ, enweghị m windo n'azụ m, ana m agbanye ọkụ dịka m chere na ọ dị mma. Nke ahụ bụ, Enweghị m nsogbu ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịzụta laptọọpụ maka ịrụ ọrụ n'èzí na ihu igwe dị iche iche ma ọ bụ nyochaa n'ọfịs, ebe e nwere ọtụtụ oriọna ma ọ bụ ntụpọ ọkụ, iji ngosipụta ọhụụ nwere ike ọ gaghị adị mfe.
N'ikpeazụ, enwere m ike ịsị na m nwere ike ịkwado obere ebe a - niile dabere na ọnọdụ ị ga-eji ihuenyo na mmasị nke aka gị. Kwesịrị, gbalịa ụzọ dị iche iche tupu ịzụta ma hụ ihe ịchọrọ karịa.